Macverin U32 Type C ny 3 seranana USB 3.0 adaptatera - Shenzhen China Macverin Electronics
Macverin U32 Type C ny 3 seranana USB 3.0 adaptatera
MACVERIN U32 dia WIFI NON-tsy hiasa Type-C ny USB3.0 * 3 seranana adaptatera, izany manohana ny hifandray amin'ny Macbook, Nintendo jiro IMac Pro, HUAWEI, XIAOMI PCs, Samsung S8, LG5, HUAWEI M10 sns telefaonina ho an'ny lahatsary outputs. Mifanaraka amin'ny 5V / 3a, 9V / 2a, 14.5V / 2a voltages isan-karazany sy ny onja, afaka hanitatra aterineto karatra, karatra mpamaky, kapila USB. Koa miasa tsara noho ny mamaly ny mifandrindra sy ny angon-drakitra. Hamaha ny olana MACBOOK tsy ampy seranana. Nikela-nopetahany takela interface tsara dia manana fahafahana matanjaka antioxidant; elektrika soa aman-tsara ...
MACVERIN U32 dia WIFI NON-STOP miasa Type-C ny USB3.0 * 3 seranana adaptatera, izany manohana ny hifandray amin'ny Macbook, Nintendo jiro IMac Pro, HUAWEI, XIAOMI PCs, Samsung S8, LG5, HUAWEI M10 sns telefaonina ho an'ny lahatsary outputs.
Mifanaraka amin'ny 5V / 3a, 9V / 2a, 14.5V / 2a voltages isan-karazany sy ny onja, afaka hanitatra aterineto karatra, karatra mpamaky, kapila USB. Koa miasa tsara noho ny mamaly ny mifandrindra sy ny angon-drakitra. Hamaha ny olana MACBOOK tsy ampy seranana.
Nikela-nopetahany takela interface tsara dia manana fahafahana matanjaka antioxidant; fototra azo antoka herinaratra insulation sosona ivelany, fiarovana avo roa heny ny fiarovana mba hampihenana ny fitsabahana, milamina fifindran'ny; high quality matte
Model No. U32 Type: Type C USB 3.0 3 Seranana
Hot-swappable USB 3.0 seranan-tsambo amin'ny faran'izay haingana ny lahatsary nafindrany, hatramin'ny 3a amin'izao fotoana izao, WIFI NON-tsy hiasa;
USB Seranana: Connect amin'ny kapila USB, HDD, fitendry sy ny totozy ary ny sasany hafa fitaovana USB seranan-tsambo.
Soraty C Vehivavy: 30U Gold voapetaka, Tohano mafana-plug in-10000;
Previous: Macverin U31 USB Type C foiben'ny amin'ny 2 * USB 2.0 sy 1 * USB 3.0
Next: Macverin U33 Type C ny 2 * US 2.0,1 * USB 3.0, + HDMI + DP adaptatera
Dovia Fa Apple Smart Phone
Phone Mobile Cordless Charger
Mini Wireless mamaly ny pad
Phone Mobile Portable Charger
Phone Mobile Wireless Charger pad
Phone Wireless fa mamaly ny
Qi mamaly ny pad
Qi Wireless Charger Fa Iphone8
Quick Wireless X Charger ho an'ny iPhone
Phone Mobile Universal Charger
Universal Qi Wireless mamaly ny pad
Wireless Charger Fa Samsung
Wireless fa mamaly ny ho an'ny iPhone
Wireless Qi Charger ho an'ny iPhone
Wireless Qi fa mamaly ny
Macverin U304 USB C ny USB 2.0, USB 3.0 adaptatera
Dual Lightning adaptatera & Splitter for Head ...
Smart USB 3.0 Type C Hub for MacBook Air Pro US ...
Dual Tselatra Headphone Audio & Niandraikitra Sp ...
USB Type C ny HDMI 4K 60 HMZ 1.8m Cable, USB C ...